विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : प्रेममा असफलता मुख्य कारण, न्यूनिकरण गर्न यसो गर्ने कि ? – Etajakhabar
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : प्रेममा असफलता मुख्य कारण, न्यूनिकरण गर्न यसो गर्ने कि ?
काठमाडौँ, २५ भदौ । सञ्चारमाध्यमले आत्महत्यासम्बन्धी समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्दा संवेदनसील हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मनोविज्ञानमा विद्यावारिधि गर्नुभएका विजय ज्ञवालीले आत्महत्याका समाचार कहाँ राख्ने, केके कुरा समेट्ने, शीर्षक कस्तो राख्ने भन्ने विषयमा सजक हुनुपर्ने बताउनुभयो । आत्महत्याबारे खुलेर कुरा नहुँदा र आत्महत्याको सोच, व्यवहार र प्रयासलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा घटनामा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रजनन उमेर समूह (१५–२९)का व्यक्तिको मृत्युको तेस्रोे प्रमुख कारण आत्महत्या रहेको ज्ञवालीले बताउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आत्महत्याको ९० प्रतिशत कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो । साठी प्रतिशत आत्महत्या निराशाका कारणले हुने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २५, २०७४ समय: १८:०६:३३